Qorfuhu waa dhir cunto oo aad u udgoon isla markaana dhadhan fiican leh. Waxaa qorfaha daawo ahaan loo isticmaali jiray mudo kumaan sano ah waa loo aaminsanaa inuu yahay daawo dhaqameed caafimaad badan. Waxaa jirtay waqti qorfuhu ka qiimo badnaa dahabka!.
2. Kobcinta shaqada maskaxda:
Waxaa la arkay in qorfuhu kobciyo feejignaanta, wuxuu kaloo u fiican yahay xusuusta. Ardayda dareenta walaaca iyo isku yaacsanaanta xilliyada imtixaanka ayaa lagula taliyaa inay cabaan shaah qorfe lagu daray subaxa hore, wuxuu dajiyaa maskaxda.
5. Ka hortagga cudurrada maskaxda:
Qorfuhu waxuu daawo iyo ka hortag u noqon karaa xanuun maskaxda ku dhaca, sida Alzheimer’s, burooyinka maskaxda iyo Parkinson oo ah cudur ku bilowda burburka unugyada maskaxda ee dareen wadayaasha ah .
6. Xanuunka caadada: Shaah qorfe leh oo aad cabtaa maalmaha caadadu soo so dhowdahay ama maalinta koobaad waxay yareysaa xanuunka caadada.
Waxaa la arkay in qorfuhu yareeyo xanuunka lafaha gaar ahaan kalagoysyada.
Waxaa Tijaabo lagu sameeyay bukaano qabay bararka kala goysyada oo aan socon karin, waxaa la siiyay qaado barkeed qorfe budo ah iyo qaado malab ah subax kasta quraacda ka hor waxaana lagu arkay isbeddel weyn mudo asbuuc gudihiis ah, bil gudaheedna socodkii ayay dib ugu bilaabeen.
Qufaca iyo ifila waxaa kaloo lagu daaweeyaa in la cabbo isku-darka biyo dirran, malab iyo qorfe, quraacda kadib iyo habeenkii intaan la seexan ka hor.